किन र कसरी घट्यो टीकापुर घटना?
थरूहट प्रदेश माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने भनिएको टिकापुरमा ७ प्रहरी र एक बालकको ज्यान जाने गरि हिंसा भड्कियो। किन र कसरी आज हिँसा भडकियो?
टिकापुर क्षेत्रलाई चार दिन अघिदेखि नै स्थानीय प्रशासनले निशेधाज्ञा जारी गरेको थियो। बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ वजेसम्म निशेधाज्ञा जारी भएकाले सार्वजनिक स्थलमा सभा सम्मेलन गर्न रोक लागेको थियो। प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा तोड्ने आन्दोलनकारीहरुले घोषणा नै गरिसकेका थिए। स्थानीय पत्रकार योगेश रावलका अनुसार, हिजो नै थरुहटका कार्यकर्ताले निषेधाज्ञा तोड्ने र सरकारी बोर्ड झिकेर थरूहट स्वायत्त प्रदेश राख्ने घोषणा गरेका थिए।
कैलालीका थारू समुदायले थरूहट प्रदेशको माग गर्दै निरन्तर प्रदर्शन जारी राखेका थिए। सोमबार निषेधाज्ञा तोड्न थारू समुदायका मानिस बस्ती-बस्तीबाट आउने भनिएको थियो। आन्दोलनले उग्ररुप लिने देखिएपछि हिजोमात्रै आन्दोलनकारी र प्रशासन बीच समझदारी बनेको थियो-शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने।
आज बिहान प्रहरीलाई टिकापुर घेराउ हुँदैछ भन्ने सूचना आयो। यस्तो सूचना पछि मोतिनगर, टुरगौली,वनगाउँ, अस्नेहरी र बर्दियाबाट आउने दुई नाका दौलतपुर घाट र सेन्कट्टीमा प्रहरी परिचालन गरियो। टिकापुर आउने सबै नाका ब्लक गरियो।
टिकापुर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने लम्कीबाट १७ किलोमीटर दक्षिणमा पर्छ। थारूहरुको बाहुल्य बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा केही दशक अघिदेखि पश्चिम पहाडबाट बसाई सरेर आएका पहाडी समुदायका मानिस टिकापुरमा बस्दै आएका छन्। टिकापुर वरिपरिको बस्तीमा भने थारुहरुकै बाहुल्यता छ। टिकापुरको यही जातीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले आफ्नो सक्रियता बढाएको थियो। नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख लक्ष्मण न्यौपाने तीन दिनदेखि टिकापुरमै बसेका थिए।
प्रहरीको दाबी अनुसार, वरिपरिका विभिन्न गाउँ र बस्तीबाट थारूहरू जुलुससहित आज बिहानैदेखि टीकापुर आउन थाले।
टिकापुरस्थित सशस्त्रको उग्रतारा गणप्रमुख एसपी लक्ष्मण सिंहले सेतोपाटीसँग भने, ‘टिकापुरको चारै दिशाबाट घरेलु हातहतियारसहित जुलुस आउँदै गरेको सूचना पाएपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा दस्ता परिचालन गर्यौं।’
उनका अनुसार टिकापुर नगरपालिकाको पूर्व सुकुम्बासी बस्ती, उत्तरतर्फ टुरगौली, लम्की, पश्चिमतर्फ जोशीपुर मनुवा र दक्षिणतर्फ नारायणपुर, थापापुरबाट जुलुस आएको थियो। सुरूमा आन्दोलनकारीले प्रहरी प्रशासनलाई व्यानर बोक्ने, शान्तिपूर्व जुलुसमात्र निकाल्ने बताएका थिए।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यी चारै तिरको नाकामा एक एक प्लाटुन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए। सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा हदैसम्मको संयमता अपनाउन आदेश थियो। नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रिया अन्तिममा रहेकाले गर्दा पनि गृह मन्त्रालयको हदैसम्मको लचकता र संयमता अपनाउनु भन्ने सन्देश प्रहरी/सशस्त्र प्रधान कार्यालयले जारी गरेका थिए। केहि दिनअघि सुर्खेतमा त सिरहामा धेरै बल प्रयोग गरेको भन्दै सुरक्षाकर्मीको आलोचना भएपछि प्रहरी माथि संयम अपनाउने थप दवाब थियो।
पत्रकार रावलका अनुसार टिकापुर वरिपरि थारूकार्यकर्ताको त्यति बाक्लो उपस्थिति थिएन तर प्रहरी भने सबै ठाउँ बाँडीएका थिए। मोतिनगरबाट करिब १५ हजार कार्यकर्ता आउँदै गरेको थाहा पाएपछि एसएसपी न्यौपाने त्यतै गएका थिए। उनको साथमा सशस्त्र प्रहरीका एसपी सिंह पनि थिए।
एसपी सिंहका अनुसार दुवैजनाले मिलेर जुलुसलाई निशेधित क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न सम्झाउदै अघि बढेका थिए। प्रहरीले अनावश्यक गोली चलाउला भन्ने डर पनि थियो उनीहरुलाई। अन्दाजी २ बजेर २५ मीनट तिर मनुवाको सहिद गेट नजिकै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई घेराबन्दीमा पारेर आक्रमण गरियो। त्यसै बेला प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो। हवाई फायर गर्‍यो। स्थिति तनावपूर्ण बन्यो।
एसएसपी न्यौपानेले ‘भीडलाई संयमता अपनाउन’ आव्हान गर्दै थिए।
‘प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न बाध्य नपार्न’ एसएसपी न्यौपानेले आफै सम्झाएका थिए। नेपाल प्रहरीका एसएसपी र सशस्त्रका एसपी पनि भीड तिरर वितर गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा दुईतिर भए।
जुलुस अघि बढ्दै मोतिनगरको पशुहाट नजिक आइपुगेको थियो। जहाँ एसएसपी न्यौपाने ३०० प्रहरीको कमाण्ड गर्दै थिए। पशुहाटमा आन्दोलनकारी र प्रहरी धेरै नजिक थिए। नजिकै गएर एसएसपी न्यौपानेले सम्झाउन खोज्दा आन्दोलनकारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए।
पत्रकार रावलका अनुसार, आन्दोलनकारीले उनका हात बाँधेर घरेलु हतियारले जथाभावि प्राहर गरेपछि उनको मृत्यु भएको थियो।
कमाण्ड गरिरहेका सिनियर अफिसर नै मारिएपछि प्रहरीहरुको भागागभाग भयो। आन्दोलनकारीले भाग्दै गरेका प्रहरीहरुलाई पनि आक्रमण गरे। कतिपय प्रहरी त आफ्ना हतियारै छोडेर भागेका थिए।
भाग्ने क्रममै आन्दोलनकारीले जो अघि भेटिन्छ त्यसैलाई प्रहार गरेर मारेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरी हवल्दार राम विहारी चौधरीलाई लुकेर बसेको फेला पारेपछि कुटपिट गरि आन्दोलकारीले जिउँदै जलाईदिए। उनलाई कसरी जलाए भनेर चाँहि अहिलेसम्म यकिन नभएको प्रहरीले बताएको छ।
भाग्ने क्रममा एकजना प्रहरी नजिकैको घरमा पसेर पानी खाएर निस्केको देखेपछि आन्दोलनकारीले त्यहि घरलाई ताकेर गोली हानेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। उक्त गोलीको निसानामा शसस्त्र प्रहरी हवल्दारका दुई वर्षिय बालक पनि परे।
प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार, टीकापुर घटनामा नेकपा–माओवादीका वैद्य र चन्द समूहमा आवद्ध पूर्व लडाकूहरुसमेत संलग्नता थियो। ‘हदैसम्मको संयमता अपनाएर अगाडि बढेको’ सुरक्षा बलले आन्दोलनकारी हिंसात्मक होलान् र त्यसरी आक्रमण गर्लान भन्ने आंकलन गरेका थिएनन्।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी रामकुमार खनालले भने, ‘बिहान थारू समुदायका व्यक्तिहरुले जुलुस शान्तिपूर्वक हुन्छ भनेर आश्वासन दिएका थिए। त्यसैले प्रहरी केवल भीड नियन्त्रण गर्ने हिसावले मात्र परिचालन भएको थियो।’
यसैवीच टीकापुरस्थित सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिए अनुसार जुलुसमा आउने कतिपय मानिसले घरेलु हातहतियार बोकेका थिए भने कतिपयले भरूवा बन्दुक समेत प्रयोग गरेका थिए। डीआईजी खनालले भने आन्दोलनकारीले कुनै पनि किसिमको हतियार प्रयोग गरेकोबारे पुष्टि गर्न नसकिएको बताए।
पत्रकार रावलका अनुसार, एसएसपी सहित यत्रो प्रहरीको मृत्यु होला भन्ने अनुमान आन्दोलनकारीहरूले समेत गरेका थिएनन्। प्रहरी अधिकारी नै मारिएपछि आन्दोलनकारी आफ्नो योजना अनुसार बजार प्रवेश भने गरेनन्।
कैलाली केन्द्रीत सुरक्षा जालो
अहिले नेपाली सेनाको बाहेक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको झण्डै ३ हजारको हाराहारीमा रहेको संख्याले सुदूर पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई लक्षित गरेर सुरक्षा जालो निर्माण गरेको छ।
त्यो बाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सयौं गुप्तचरहरू समेत क्रियाशील छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलको कैलाली अत्तरियामा सुदूरपश्चिम (वैद्यनाथ) बाहिनी नै छ। जसलाई कमाण्ड गरिरहेका छन्, सशस्त्रका डीआईजी खडानन्द चौधरीले। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय धनगढी केन्द्रीत रहेको छ, डीआईजी खनालले नेतृत्व गरेको प्रहरी सुदूर पश्चिममा कार्यरत छ।
टीकापुर मै सशस्त्र प्रहरी बलको उग्रतारा गण छ। जहाँ झण्डै ७ सय ६१ को हाराहारीमा फौज रहेको हुन्छ। त्यस्तै सशस्त्रको धनगढीमै सीमा सुरक्षा कार्यालय छ। अनि कैलालीको बनवेढामा बढिमालिका गण तैनाथ छ।
सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढीमा रहेको छ भने त्यसमाताहत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा रहेको छ। त्यसलाई एक जना डीएसपीले कमाण्ड गरेका छन्। यी बाहेक नेपाल प्रहरीको धनगढीमा दंगा नियन्त्रण गण र अञ्चल गुल्म पनि छ।
कैलाली केन्द्रीत प्रहरी र सशस्त्रको यति ठूलो सञ्चाल हुँदा पनि किन चुक्यो टीकापुरमा भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सुरक्षाकर्मीको टिकापुर संहारलाई अप्रत्यासित आक्रमण भनेर विश्लेषण गरेका छन् गृह अन्तर्गतका सुरक्षा निकायले। ‘प्रहरी/सशस्त्र भने भीड नियन्त्रणको हिसावमा मात्र थियो आन्दोलनकारीहरु भने आक्रमणसमेत गर्ने गरी आएका थिए’ उपप्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमले संसद व्यवस्थापिकाको बैठकमा जानकारी गराए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ८, २०७२, १२:०६:२९